janvier 2020 · déliremadagascar
Mankany amin’ny tsaratsara kokoa. Niova ho Wimmo no iantsoana ny SIM ( Société Immobilière Michelin). Nosafidiana manokana io anarana io satria tanora kokoa, maoderina kokoa ary manamafy ny teny filamatry ny orinasa: « ensemble, innovons l’immobilier ». Continuer la lecture →
Tsy mijanona amin’ny fanampiana vonjimaika ho an’ireo traboina. Manao antso avy amin’ny fitondram-panjakana ny ONG Ny Fanahy maha olona hanome alalana ny fiaramanidina hitondra ireo fanampiana ho an’ireo traboina vokatry tondra-drano. Nambaran’ny filohan’ny ONG, Ny Rado Rafalimanana ny 27 Janoary 2020 tamin’ny mpanao gazety fa iray andro aorian’ny faneken’ny fitondram-panjakana dia higadona eto Madagasikara io fiaramanidina io. Continuer la lecture →
FEDERASIONAN’NY SEMPAMA ANTANANARIVO: Manahy ny tsy hahatanteraka ny veliranon’ny Prezidàn’ny Repoblika
« Manamarina ny valan-dresaka nataon’ny Prezidà Rajoelina Andry tamin’ny mpanao gazety ny tombana nataonay ». Nanao tombana ny toe-draharaha eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, fampianarana ara-teknika sy fampiofanana arak’asa ny federasionan’ny sendikan’ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara (SEMPAMA) sampana Antananarivo ka nampahafantariny tamin’ny alalan’ny tafa ho an’ny mpanao gazety izany ny 27 janoary 2020 teny Mahamasina. Continuer la lecture →
Havadika ho azo tsapain-tanana. Nitafa niaraka tamin’ireo mpianatry ny EPP Maibahoaka Ivato ireo tomponandraikitra ao amin’ny Orange Madagascar, androany 24 janoary 2020. Continuer la lecture →